Ohad Samet's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Ohad Samet
Ohad Samet ndiye mubatanidzwa uye CEO we ChokwadiAccord, yekutanga-ye-yayo-mhando algorithmic yekudzosa chikuva. TrueAccord iri kushandisa muchina kudzidza, hunhu analytics uye nzira yehunhu yekubatsira mabhizinesi uye mabhizinesi madiki kudzoreredza yakabhadharwa kubhadhara uye chengetedza hukama hwakanaka hwevatengi.
Chikwereti Kuunganidzwa kweCommerce Startups: Iyo Inotsanangurwa Nongedzo
Mugovera, January 19, 2019 Mugovera, January 19, 2019 Ohad Samet
Shanduko-yakavakirwa kurasikirwa ihwohwo hwehupenyu kumabhizinesi mazhinji, nekuda kwekudzosera kumashure, mabhiri asina kubhadharwa, kudzoreredza, kana zvigadzirwa zvisina kudzoserwa. Kusiyana nemabhizimusi ekukweretesa anofanirwa kugamuchira yakakura chikamu chekurasikirwa sechikamu chebhizimusi ravo modhi, mazhinji ekutanga anotora kurasikirwa kwekutengesa sekunetsa kusingade kutariswa kwakawanda. Izvi zvinogona kutungamira kune spikes mukurasikirwa nekuda kwekusatariswa kwevatengi maitiro, uye backlog yekurasikirwa iyo inogona kuderedzwa zvakanyanya nevashoma